ပင်မ စာမျက်နှာ | Mother Finance
ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ သိမှတ် စရာများ
နေ့စဉ် ငွေကြေးအခက်အခဲများ ပြေလည်စေရန် ချေးငွေများကို လွယ်လင့်တကူရရှိစေခြင်
သက်သာသော အတိုးနှုန်း | ပုံသေကာလ | ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချေးငွေ
ချေးငွေများကို (၄၈)နာရီအတွင်း ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အာမခံပစ္စည်းပေးရခြင်းတို့ မလိုအပ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချေးငွေများ (Personal Loan) ကို Mother Finance Application မှတဆင့် ၂၄/၇ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ကြေငြာထားခြင်းမရှိဘဲ ကောက်ခံသော အခွန်အခ/ဒဏ်ကြေးများ မရှိပါ။ အောင်မြင်စွာပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်မှုပေါ်မူတည်၍ ချေးငွေပမာဏနှင့် သက်တမ်းတို့ကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ပြင်ပသို့မပေါက်ကြားစေရန် လိုအပ်သော အဆင့်မှီ လုံခြုံရေးစနစ်များ ထားရှိပါသည်။
Mother Finance အကြောင်း
Mother Finance ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Registration No. 101001296) သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ဘဏ်မဟုတ်သောငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ (NBFI/FC(R)-11/08/2016) လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ Mother Finance
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်သော ဝန်ဆောင်မှုမှာ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော Application ဖြစ်ပါသည်။ ထို App သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် data signal ထောင်ပေါင်းများစွာကို အသုံးပြုပြီး လူကြီးမင်းတို့အတွက် ချေးငွေများရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Android smartphone အသုံးပြုသူတိုင်း ချေးငွေလျောက်ထားနိုင်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာနောက်ကြောင်းစစ်ဆေးခြင်း များ (financial history) မရှိပဲ ချေးငွေလျင်မြန်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းတို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောချေးငွေများကို လျင်မြန်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းတို့အတွက် digital credit history နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ် (financial identity) တည်ဆောက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Mother Finance ၏ ရည်မှန်းချက်
ဝန်ဆောင်မှုရရှိမှုနည်းပါးသောဒေသများမှလူများအတွက် ငွေကြေးရင်းမြစ်များသို့လွယ်ကူစွာ ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်၊ မိမိ၏ဘဏ္ဍာရေးကို မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိစေရန် စိတ်အားထက်သန်စွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်းသည် ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း (စနစ်)များသို့ ဆက်သွယ်ခွင့်ရရှိရန်နှင့် ၎င်းဆက်သွယ်မှုမှတဆင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုစနစ်များတွင် ပါဝင်သူများအတွက် ရွေးချယ်ခွင့်များပေးထားရန်လိုအပ်ပြီး ထိုသို့ရွေးချယ်ခွင့်များကြောင့် မိမိ၏ငွေကြေးကို မိမိစိတ်ကြိုက် စီမံခန့်ခွဲခွင့် ရရှိစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအား မိမိတို့၏ငွေကြေးကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းစာရင်းရေးဆွဲခြင်း၊ စုဆောင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း၊ သင်ယူလေ့လေားခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ငန်းရပ်တိုင်းတွင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့် ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
Mother Finance App ကို download ရယူပါ။
လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းပါ။
ချေးငွေပမာဏနှင့် ကာလတို့ကို မိမိနှစ်သက်သလို ဖြည့်စွက်ပါ။
အတည်ပြုခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး မိမိ၏ဘဏ်စာရင်း သို့မဟုတ် mobile money account မှတဆင့် ချေးငွေရယူပါ။
App ကို တိုက်ရိုက် Download ဆွဲရန်
လူကြီးမင်း၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံး ချေးငွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
အရေးပေါ်ငွေကြေး လိုအပ်နေပါသလား? ကွန်ပြူတာဝယ်ခြင်း၊ အိမ်ပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခမ်းအနားတစ်ခုခုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များစွာ ပေးရန်ရှိနေပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဖြေရှိပါသည်။
သင့်ရဲ့ချေးငွေကို အသက်သာဆုံးအတိုးနှုန်း၊ ပြောင်းလဲမှုမရှိသောနှုန်းထားများဖြင့် ချေးယူနိုင်ပါပြီ။ ဒီနေ့ဘဲ သင့်ရဲ့ ချေးငွေလျှောက်ထားမှု အတည်ပြုချက်ကို စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရုံးလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ခြင်းများနှင့် အာမခံပစ္စည်းများ မလိုအပ်ပါ။ တစ်ကိုယ်ရည်ချေးငွေအတွက် Mother Finance App ကို အသုံးပြုပြီး အချိန်မရွေး ချေးငွေလျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
သင်မမြင်သာတဲ့ အပိုထပ်ဆောင်းထပ်မံကုန်ကြမှု များ ၊ အပိုကြေးထပ်ပေးရခြင်း နှင့် အခြား နစ်နာကြေးများ မရှိပါ။
မေးခွန်းများရှိပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဖြေရှိပါသည်။
ချေးငွေ (ငွေ) ကို ဘယ်လိုလက်ခံရရှိမှာလဲ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်လွဲပြောင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချေးငွေကို ဘယ်နေရာတွေအတွက် အသုံးပြုလို့ရပါသလဲ။
အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်၊ အတိုးနှုန်းမြင့်မားသည့် ချေးငွေများပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်၊ အိမ်ပြင်ရန်နှင့် အခြားအသုံးစရိတ်များစွာအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ချေးငွေကို သတ်မှတ်ရက်ထက်စောပြီး ပြန်ပေးလို့ရပါသလား။
ရပါသည်။ ချေးငွေကို သတ်မှတ်ရက်ထက်စောပြီး ပြန်ပေးခြင်းအတွက် မည်သည့်အခကြေးငွေမှ ပေးရန်မလိုအပ်ပါ။
Mobile App မှတဆင့် MPU Card ဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ တိုက်ရိုက်ပေးချေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Online banking နှင့် Internet banking တို့မှလဲ ငွေလွှဲပေးနိုင်သလို Ok Dollar, Wave Money အကောင့်များရှိပါကလည်း ထိုအကောင့်များမှတဆင့် လစဉ်ငွေပေးသွင်းခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ချေးငွေလျောက်ထားခြင်းကို ဘယ်လောက်မြန်မြန်လုပ်ဆောင်လို့ ရပါသလဲ။
လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံပါက Mobile App တွင် လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ခြင်းမှာ (၁၅) မိနစ်ခန့်သာ ကြာမြင့်ပါသည်။
ငွေကို ဘယ်အချိန်မှာ လက်ခံရရှိပါမလဲ။
ချေးငွေလျှောက်လွှာကို လက်ခံအတည်ပြုပြီး (၁) ရက်မှ (၃) ရက်အတွင်း ငွေကိုလက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချေးငွေကို လက်ခံအတည်ပြုပေးရန် ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်များအားလုံးဖြည့်စွက်ပြီး (၄၈) နာရီအတွင်း ချေးငွေလက်ခံအတည်ပြုသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
သင်ရှာဖွေသောအဖြေကို မရရှိပါက နှိပ်ရန်
ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒစည်းကမ်းချက်များ